China Ferrite Magnet mveliso kunye nabenzi | Rumotek
Ii-ferrites ezinzima ezisekwe kwi-barium ferrite kunye ne-strontium powders (ifomula yeekhemikhali i-BaO • 6Fe2O3 kunye ne-SrO • 6Fe2O3) eyenziwe. Ziqukethe isinyithi esineoksijini, ke ngoko zibandakanyiwe kwiqela lezinto zeceramic. Ziqulethe i-approx. I-90% ye-oxide yentsimbi (i-Fe2O3) kunye ne-10% ye-alkaline yomhlaba oxide (i-BaO okanye i-SrO) -izinto ezingafunekiyo ezininzi kwaye ezingabizi kakhulu. Zahlulahlulahlulahlula zibe zi-isotropic kunye ne-anisotropic, amasuntswana okugqibela alungelelaniswe kwelinye
ulwalathiso olufumana iimpawu ezingcono zemagneti. Iimagnethi ze-Isotropic zenziwe ngokucinezela ngelixa oomazibuthe be-anisotropic becinezelwe ngaphakathi kumazibuthe. Oku kubonelela ngemagnethi ngendlela ekhethekileyo kwaye iphindaphindwe kathathu ukuxinana kwamandla.
Icinyiwe Umazibuthe weFerrite Iipropati zomzimba
IBakala Ubungakanani UMfu. Coeff. KaBr Ukunyanzelwa Ukunyanzelwa kwangaphakathi UMfu Temp.-Coeff. YeHcj Ubukhulu. Imveliso yamandla Ubukhulu. Ubushushu obuSebenzayo Ukuxinana
I-Br (KGs) I-Hcb (KOe) I-Hcj (KOe) (BH) ubuninzi. (MGOe) g / cm³
Y22H 3.1-3.6 -0.20 2.77-3.14 Umnxeba +0.30 2.5-3.2 250 ℃ 4.95
· Sihlala sifana nangasentla ngaphandle kokuba kuchaziwe kumthengi. Iqondo lobushushu le-Curie kunye nobushushu bokulinganisa ziireferensi kuphela, hayi njengesiseko sesigqibo. Ubushushu obuphezulu bokusebenza kwemagnethi buyatshintsha ngenxa yomyinge wobude kunye nobubanzi kunye nemeko yokusingqongileyo.
Njengoko kuqhelekile kwiiceramics ze-oxide, iimagnethi ezilukhuni ze-ferrite zibonisa isimilo esinganyangekiyo kufuma, izinyibilikisi, izisombululo zealkali,
iiasidi ezibuthathaka, iityiwa, izinto zokuthambisa kunye nezinto ezingcolisa igesi. Ngokubanzi, iimagnethi ezinzima ze-ferrite zinokusetyenziswa ngaphandle kokhuselo lokongezwa komhlwa.
Ngenxa yobunzima babo obukhulu (i-6-7 Mohs), iimagnethi zeFerrite zibukhali kwaye zibuthathaka ekunkqonkqozeni nasekuguqulweni. Ngexesha lokulungiswa, kufuneka zenziwe ngomatshini ngezixhobo zedayimani. Amaqondo obushushu asebenzayo ngoomazibuthe be-ferrite ngokubanzi aphakathi kwe-40ºC kunye ne-250ºC.
Iimo ezahlukeneyo zisetyenziswa kubunjineli bezithuthi, ezinje nge-automation kunye nolawulo lwemilinganiselo. Ezinye izinto ezinje ngeMoto yombane yoomatshini (izisuli, isitulo esihleliyo semoto), Ukufundisa, ukufunxa umnyango, ibhayisekile Magnetic kunye nosihlalo wokuthambisa, njl.
Namhlanje, ii-ferrites ezinzima zimela elona nani likhulu loomazibuthe abasisigxina abavelisiweyo. Ngokuchasene neemagnethi zeAlNiCo, ii-ferrites ezinzima zibonakaliswa kukuxinana kokuhamba kodwa amandla endawo anyanzelekileyo. Oku kubangela imilo ethe tyaba yemathiriyeli. I-Barium ferrite kunye ne-strontium ferrite yahlulwe ngokuxhomekeke kwinto yokuqala.
Onke amaxabiso achaziweyo amiselwa kusetyenziswa iisampulu ezisemgangathweni ngokwe-IEC 60404-5. Ezi nkcukacha zilandelayo zisebenza njengexabiso lesalathiso kwaye zinokwahluka.
Egqithileyo Sintered NdFeB Magnet
Okulandelayo: Umazibuthe weSmCo
Indibano yeMagnetic Ferrite
Imagnethi yesandi yeFerrite
Isandi Somlomo weSazisi seFerrite
Isandi seMagnet esinguN42 NdFeB